Andiyithandi! | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 14, 2012 NgoLwesithathu, Matshi 14, 2012 Douglas Karr
La ngamagama ama-4 awona mbi unokuweva njengearhente evela kumthengi wakho. Awusoze uyiqhele nangona isenzeka ngokufuthi. Abantu baqesha abayili ukuba benze ifayile ye- akunakwenzeka… Tsala umbono entloko kwaye uwubeke emfanekisweni, kwisiza, kwividiyo okanye uphawu.
Okubi ngakumbi, kunqabile ukuba impendulo ibalulekile. Ayinamsebenzi nokuba uyayithanda okanye awuyithandi. Logama uyilo aluyi konakalisa uphawu lwakho kwaye luyilelwe ngobungcali, kuya kufuneka uliginye ikratshi lakho- kunye noluvo lwakho- kwaye ubone okwenzekayo. Abaqulunqi liqela elimangalisayo… yonke imihla lijongana nokungakhathali okungaphezulu komndilili wokuma kwehlaya. Ngokungafaniyo nokuhlekisa, umyili kufuneka acele ingxelo (aka heckling).
Nazi ezinye iingcebiso zokukunceda ujongane nokuvumela uyilo loyilo:
Ingcinga yakho inako ze ziphinde zenziwe kwihlabathi lenene ngokuchanekileyo. Ngonaphakade.
Ungu hayi umyili. Amathuba, kunjalo do yazi okungcono.
Uyilo ayisiyakho. Uyilo kubaphulaphuli bakho.
Uyilo olukhulu luya kusebenza nzima ukuhlangabezana neenjongo zoyilo ngelixa ukonwabisa izicelo zakho kunye nengxelo… hayi uyilo kwizicelo zakho.
Ukubonelela umyili wakho kunye inkululeko Ukuyila kuya kuzisa ezona ziphumo zibalaseleyo.
Gxila kwiziphumo zoyilo, hayi uyilo ngokwalo, ukulinganisa impumelelo yalo.
Ukuba unzima xa unikezele ngegalelo loyilo kwaye alisebenzi, sukubeka ityala umyili.
Njengabantu beshishini, uhlala ucinga ukuba uyazi ngcono. Ukuba uphumelele, ngamanye amaxesha kunzima nangakumbi ukuphuma endleleni kwaye uvumele umyili wakho asebenze. Njengoko siphuhlisa infographics kunye neendawo, ndihlala ndingayithandi into eyenziweyo… kodwa ndiyathobekile ukuba xa ndingena endleleni endaweni yokuba ukuphuma endleleni, Uyilo luyasilela.
Abaqulunqi abakhulu babuza iitoni zemibuzo kwaye banokude banike nomzekelo, uyilo kunye nokwenza iimpendulo zakho. Andizami ukuthetha nawe ngokutyala imali kuyilo olucekisayo; Emva kwayo yonke loo nto, uyayihlawulela kwaye kufuneka uphile nayo. Kodwa ukuba uyilo olusebenzayo kwaye ayisiyiyo isitayile sakho, thatha ithuba ubone ukuba kwenzeka ntoni!
Kwaye ungazami ukuthi, "Andiyithandi!".
tags: uyiloukwenziwa kwemizoboumzobokwi-infographicezifanakuyilo web
Iskripthi sePassword esingxamisekileyo seWordPress
Fumana iiKhonkco eziNgenayo ngokuLula ngeBlekko
Mar 18, 2012 ngo-10: 22 AM
Awunakuvumelana nawe ngakumbi, uDouglas. Abathengi bahlala babonakala beqesha umyili ukuze umthengi akwazi ukuyila eyakhe into, ngelixa izakhono zoyilo ziphoswa ngenxa yezakhono zabo zoomatshini zeAdobe. Abathengi bayasilela ukuqonda ukuba umyili onobuchule akazazi nje izixhobo zabo- bayazi “uyilo,” lelona candelo likhulu lomsebenzi wabo. Ngapha koko, abathengi bahlala bekulibala uyilo lolwabaphulaphuli, hayi bona.
Kwiphepha le-flip, abaqulunqi kunye / okanye abaphathi beprojekthi kufuneka baqiniseke ukuba bayabafanelekela abathengi babo kwaye babonisane nabo kangangoko kunokwenzeka. Abathengi abasoloko beyazi indlela yokuchaza iinjongo zabo, ke unxibelelwano olunobuchule kunye nabaxhasi luyimfuneko. Kananjalo, uninzi lwe "abayili" bayaluphosa uphawu, okanye ayisiyiyo le nto bayithethayo, kwaye abanakuyila isiqwenga esihle esikhangela injongo yomthengi, nokuba ichazwe kakuhle kangakanani na. Ndicinga ukuba abanye abathengi banokudinwa yile, nayo.
Mar 18, 2012 ngo 12:43 PM
Awunguye umthengi wakho.
Ukuba awuyithandi, yintoni ke?
Kunzima ukwamkela — kodwa yinyani!
Eyona Ndawo yokuHlala
Mar 19, 2012 ngo-6: 31 AM
Ewe, umthengi uhlala esiya apho afumana inkxaso kwaye ndiqinisekile ukuba wonke umntu uyayazi le nto. Kodwa ngamanye amaxesha siyavumelana nomthengi ngaphandle kokufumana nepeni enye. Njengam "iTrust" ligama elibalulekileyo kwishishini.
Mar 22, 2012 ngo 12:26 PM
Andikuxeleli ukuba mangaphi amaxesha emva kokubona into endiyibuzayo malunga nale tweak okanye loo tweak okanye ingcinga engemva kwayo kuphela ukufumana impendulo ngokufanayo "Ndizamile oko sele" "Akusebenzi ngoba" kwaye ngamanye amaxesha kwabonelelwa kwangoko Umzekelo osindisiweyo wento endiyichazileyo ukuze ndizibonele ngokwam. Emva kwezi zicelo zimbini ngokubhekisele kwiiprojekthi ezahlukeneyo i-Ive ndiye ndaqala ukungaze ndibuze nemibuzo kwakhona kuba ekugqibeleni bayazi ngcono.
Kwakhona i-Id yongeza i-dont pigeon hole umyili wakho okanye iqela lokuyila ngokungabaniki ukhetho olwaneleyo okanye ingxelo ngaphambili.